Rugby – « Tana 7’s International »: ho fanomanantena amin’ny “Lalaon’ny Nosy” ny fifaninanana | NewsMada
Rugby – « Tana 7’s International »: ho fanomanantena amin’ny “Lalaon’ny Nosy” ny fifaninanana
Tafiditra indrindra anatin’ny fanomanantenan’ireo mpilalao malagasy, taranja rugby lalaovin’olona fito, hiatrehana ny “Lalaon’ny Nosy”, hanomboka anio eny Mahamasina ary hitohy rahampitso, ilay fifaninanana iraisam-pirenena “Tana 7’s International”. Fifaninanana handraisan’ny ekipa miisa valo anjara, ahitana ny fifanandrinan’ny Makis an’i Madagasikara sy ny ekipan’ny Air Force Fiel avy any Angletera. Tsiahivina fa efa tonga eto Madagasikara roa andro izay ireto mpifanandrina amintsika ireto ary efa nanao fanazarantena, omaly, teny amin’ny kianjan’ny Makis Andohatapenaka.
Nanao antso avo hanotronan’ny mpanakafy ny taranja rugby ity lalao goavana ity, omaly, ny eo anivon’ny Malagasy rugby, nandritra ny fampahafantarana ho an’ny mpanao gazety izany lalao izany, teny Ankorondrano. Nanambara ny filohan’ny federasiona malagasy ny rugby, Rakotomalala Marcel, fa lalao goavana ity hatrehin’ny ekipa malagasy ity satria hanomanana ny “Lalaon’ny Nosy” hatao any Maorisy ny 23 sy 24 jolay izao; ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika, ny 20 septambra hatramin’ny 2 novambra izao; ny fiatrehana ny fiadiana ny lalao eran-tany ny 2020 ary ny “Lalao olympika 2023” any Tokyo.
Mbola ho feno ny fandaharam-potoan’ny Malagasy rugby, aorian’ny “Lalaon’ny Nosy”, indrindra ny fiatrehana lalao iraisam-pirenena, araka ny fanazavana hatrany, izay angatahan’izy ireo fanohanana avy amin’ny vahoaka malagasy sy ny fitondram-panjakana.